Taariikh - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Ururka Dhakhaatiirta aan Xuduuda Lahayn waxaa la as’aasay sanadkii 1971 kii markii koox dhakhaatiir ah ay ku biireen hawlgal gargaar oo caalami ah si ay u gargaaraan dhibannayaashii dagaalkii sokeeye ee Nayjeeriya. Waxaa ay ka xanaaqeen sida ay dowladdu u soo faragelinaysay gargaarka bani’aadamnimada waxaana ay dareemeen in ay dowladdu afka ka xireyso markii ay dooneen in ay adduunka ay u sheegaan xadgudubyadii ay indhahooda ku arkeen. Akhri xeerarka iyo mabadii’da MSF
Sanadkii 1999kii, iyada oo lagu aqoonsanayo “hawsha bani’aadamnimo ee aan hore loo arkin ee ay ka waddey dhowr qaaradood”, ayaa MSF la guddoonsiiyey Abaalgudka Nabadda ee Nobel. Akhri khdbadii abaal gudka
Sanadkii 2004tii ururka waxaa la guddoonsiiyey abaalgudka Hoggaaminta Bani’aadamnimada ee Boqor Xuseen. Akri khudbadii Gudoomidda Abaal marinta
Ilaa iyo 1970 MSF waa ay sii balaaratay waxaa ay noqotay urur caalami ah oo leh 19 xaafis maamuleed waxuuna ka howl galaa ilaa 65 wadan oo dunida dacaladeeda ah.
Sawiro ka turjumaya taariikhda MSF
1971 – Dhakhaatiirta aan Xuduuda Lahayn ayaa la aasaasey
Koox dhakhaatiir iyo suxufiyiin Faransiis ah ayaa aasaasey MSF bilowgii dagaalkii iyo abaartii la socotey ee ka dhacay Biafra, Nayjeeriya, iyo fatahaadihii ka dhacay bariga Pakistan (oo hadda ah Bangaladesh).
1975 -Dadka reer Kamboodiya ee ka soo cararaya Khmer Rouge
MSF oo aasaastey barnaamijkeedii caafimaad oo weyn kii ugu horreeyey oo ay sameyso xilli ay socdeen dhibaatooyin dhinaca qaxootiga ah, iyada oo daryeel caafimaad siisey mowjado dad reer Kamboodiya ah oo ka soo cararey xukunkii Pol Pot.
1976 - Dagaalkii Lubnaan
MSF oo sameysey qalliin kii ugu horreeyey oo uu ururku ka fuliyo goob dagaal.
1979 - Fikir kala duwan oo Keeney oo Kala Jebiyey MSF
Lyada oo ay hoggaaminayaan Dr. Claude Malhuret iyo Dr. Francis Charhon, ayaa MSF waxa ay ka gudubtey habkii ay u shaqeyn jirtey oo ahaa in ay dhakhaatiir kooban u dirto meelaha ay dhibaatooyinku ka jiraan iyada oo door biddey in ay dhisto urur leh qaab-dhismeed habeysan oo bixin kara adeegyo caafimaad oo tayo leh ku bixin kara goobaha ay ka jiraan dhibaatooyinka. Dr. Bernard Kouchner oo wax ka aasaasey ururka ayaa isaga tegey ururka isaga oo arrintaas ka dhiidhiyey waxaana uu marki dambe aasaasey Médecins du Monde/Dhakhaatiirta Dunida.
1980 - Dagaalkii Afqanistaan
Ka dib markii Midowgii Soofiyeeti uu weerarey Afqanistaan maalmihii ugu dambeeyay 1979kii, taas oo dhalisey dagaal socdey toban sano, kooxaha MSF waxa ay si qarsoodi ah uga gudbi jireen xuduudda Pakistan iyo Afqanistaan waxaana ay dhowr toddobaad ku safri jireen baqlo si ay u gaaraan dadka rayidka ah ee dhaawaca ah eek u nool degaanno fog.
1980 – Xafiisyo Cusub
Xafiisyo MSF oo cusub ayaa laga furey Belgium iyo Switzerland
1984 – Abaartii Itoobiya
MSF oo furtey barnaamijyo ay ku daweyneyso nafaqo-xumada ka jirtey gobollada ay gaajadu halakeysey ee dalkaas
1984 – MSF Holland oo la furey
Xafiis cusub oo MSF leedahay ayaa laga furey Amsterdam
1985 - Dowladda Itoobiya ayaa dalka ka soo saartey MSF
MSF ayaa lagu amrey in ay laasho hawlaheedi ka dib markii ay ka hadashey sid ay dowladdu ugu takri-faleyso gargaarka iyada oo xoog ku rareysa malaayiin dadkeeda ka mid ah, taas oo ay ka dhaltey in ay dhintaan tobanaan kun.
1985 - Iskahorimaadkii ka dhacay Ameerikada Dhexe
MSF oo daryeel caafimaad Honduras ku siineysa qaxootiga ka cararaya iskahorimaadyada hubeysan ee El Salvador iyo Nicaragua.
1986 - Dagaalkii Sokeeye ee Sri Lanka
MSF oo habeysay barnaamijyo xarumo caafimaad oo wareega iyo cusbitaallo ah si ay u daweyso muwaadiniinta ku dhaawacmey iyo kuwa ay dhibaatada maskaxeed ku soo gaartey dagaalka u dhaxeeya dowladda iyo Tamil Tigers.
1986 - MSF oo Ballaaratey
MSF oo furtey xafiisyadeed Luxembourg iyo Spain
1988 – Dhul-gariirkii ka dhacay Armenia
MSF ayaa markii ugu horreysey daryeel caafimaad ku bixisey Midowga Soofiyeeti.
1989 - MSF oo furtey Barnaamijkeedii ugu horreeyey ee Caafimaadka Dhimmirka
MSF oo taageero caafimaadka dhimmirka ah soo gaarsiisey dadkii ka badbaadey dhul-gariirkii Armenia waxaana sanadkii xigey ay barnaamij caafimaadka dhimmirka ah u bilowdey dadka ku nool Dhulalka Reer Falastiin.
1989 - Midowgii Soofiyeeti oo Burburey
MSF oo bilowdey barnaamijyo ay wax kaga qabaneyso nidaamyadii caafimaadka ee sii xumaadey ee ka jirey dhulkii loo yaqaanney Midowgii Soofiyeeti.
1989 - Dagaalkii Sokeeye ee Laybeeriya
MSF oo daryeel caafimaad oo degdeg ah bixineysa markii uu dagaalku marayey halkii ugu xumaa.
1991 - Dagaalkii sokeeye ee Soomaaliye
MSF ayaa barnaamijyo qalliin ka waddey magaalada Muqdisho ee ay dagaalladu halakeeyeen waxaana ay gargaareysey qaxootiga ku nool dalalka deriska ah.
1991 - Qaxooti Kurdiyiin ah oo ka Cararey Waqooyiga Ciraaq
Lyada oo ahayd waxqabadkii degdegga ahaa ee ugu weynaa ilaa iyo hadda, ayaa MSF waxa ay daryeel Turkiga, Iiraan, iyo Jordan ku siineysaa Kurdiyiintii ay guryahoodu ka soo saareen ciidamadii Ciraaqiyiinta ee ku soo siqayey.
1992 - Abaartii Soomaaliya
MSF ayaa bulshada caalamka ku baraarujisey abaarta baahsan waxaana ay furtey barnaamijyo ay ku daaweyneyso carruurta iyo dadka waaweyn ee ay nafaqo-xumadu hayso.
1992 - Dagaalkii Sokeeye ee Afqanistaan
Lyada oo uu dagaal sokeeye oo xun uu ka dhacayo dalka iyo caasimadda, ayaa MSF ay ka sii shaqeyneysey AFqanistaan, iyada oo si joogto ay ula xaaleysey kooxihii dagaalamayey si ay agab u geyso dalka iyo si ay u gaarto kuwa u baahan daryeel caafimaad.
1993 – Dagaal Sokeeye oo ka dhacay Burundi
MSF ayaa rayidka ku gargaartey Burundi waxaana y qaxootiga ku gargaarey Tanzania iyo Twanda iyo Zaire?
1991-95 - Dagaalkii Bosnia
MSF oo wadda barnaamijyo caafimaad iyo kuwo caafimaadka dhimmirka ah waxaana ay gargaar caafimaad ay bixineysey goobihii ay Qaramada Midoobey ay ahayd in ay ka dhigaan “meelo lagu ammaangalo” ee Gorazde iyo Srebrenica.
1994 - Xasuuqii Rwanda
MSF ayaa ku negeyd caasimadda, Kigali, intii uu socdey xasuuqii ay in ka badan 800,000 oo Tutsi iyo Hutu “aan mayal adkeyn ah” ay ku dileen xagjiryaal Hutu ah, waxana ay qaadatey go’aankii aan hore loo arkin ee ahaa in ay ku baaqdo in ciidamo mileteri ah oo caalami ah ay arrinta soo farageliyaan.
1994-95 - Dhibaatooyikii Goma, Zaire (Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo)
MSF waxa ay shaqaalaheeda ka saartey xerooyinka qaxootiga ee ku yaalley Zaire iyo Tanzania, waxaana ay cambaareysey leexsashada ay gargaarka leexanayaan kuwii ka dambeeyey xasuuqa ee markaa gacanta ku hayey xerooyinka.
1995 - Dadkii lagu laaley Srebrenica
MSF waxa ay goobjoog ka ahayd qabsashadii “goobtii ammaanka” ee Qaramada Midoobey waxaana ay ka hadashey qowracii xigey ee loo geystey ilaa 8,000 oo Bosniyaan ah iyo musaafurintii iyo xadgudubkii ay kumanaan kale ay u geysteen ciidamda Serbiya.
1995 - Dagaalkii Jejniya
MSF oo gargaar caafimaad soo gaarsiisey dadkii rayidka ahaa ee uu sal-kiciyey dagaalka oo xaalado aan sugneyn ugu dhex noolaa Jamhuuriyadaha Ruushka ka tirsan ee Jejniya iyo Ingushetiya, iyo Joorjiya oo deris la ah.
1996 - Dhakhdhaqaaqa MSF oo Ballaartey
MSF-Norway ayaa la aasaasey, iyada oo ay ku soo biireen xafiisyo kale oo MSF ah oo laga furey Austria, Australia, Denmark, Hong Kong, Japan, Jarmalka, Giriigga, Sweden, iyo Ingiriiska (the UK).
1996 – Cudurka qoor-gooyaha (Meningitis) oo ka dillaacey Nayjeeriya
MSF oo barnaamijyadeeda caafimaad iyo kuwa bulsho ku ballaarisey dalal dhowr ah si ay u soo geliso dhallinta la fogeeyey.
1996-97 – Qaxootiga reer Rwanda oo Gargaar Doonay
MSF ayaa gargaarey qaxootiga reer Rwanda ee khasabka looga soo saarey xerooyinkii ku yaalla Zaire oo markii ay soo gurya-noqonayeen ee ay ciimada Rwanda iyo mucaaradki reer Kongo ee ay isbahaysiga lahaayeen ka hor istaageen in la gargaaro qaar badan oo ka mid ah kuwii ku sii cararayey goobaha sii fog ee dalka Zaire ka mid ah – kuwaas oo ay noqdey dhibanayaan dil baahsan loo geysto.
1997 - Carruur derbi-jiif ah oo lagu Dayacay Madagascar, Brazil, iyo Filibiin
MSF expands its medical and social programmes in several countries to include marginalized youth.
1998 - Abaartii Waqooyiga Kuuriya
Markii ay awood u yeelan weydey in ay xaqiijiso in gargaarka caafimaadka uu gaaraya dadka halista ugu badan ugu jira nafaqo-xumada, ayaa MSF ay ku khasbanaatey in ay ka soo baxdo Waqooyiga Kuuriya saddex sanadood ka dib, laakiin waxa ay weli gargaareysaa qaxootiga Waqooyiga Kuuriya ee u soo cararey Shiinaha.
1998 - Macluushii ka dhacdey Koonfurta Suudaan
MSF oo wax ka qabatey macluushii baahsaneyd ee ay sababeen dagaalka sokeeye iyo abaarta ka dhacdey gobolka Baxral-Qazaal.
1998 - Duufaantii Mitch
MSF waxa ay dhibbanayaasha ku gargaareysaa Honduras, Nicaragua, Guatemala, iyo El Salvador.
1998 - Dagaalkii Sokeeye ee Jamhuuriyadda Kongo (Brazzaville)
Ka dib markii ay la kulantey dhibbanayaal badan oo kufsi loo geystey, ayaa MSF ay wax ka beddeshey borotokoolladeedii waxqabadka degdegga ah si ay u dhexgeliso daaweynta dhibbanayaasha kufsiga iyo weerarada jinsiga la xiriira.
1999 - MSF oo La Guddoonsiiyey Abaalmarinta Nabadda ee Nobel
MSF ayaa lagu sharfey “hawsheeda bani’aadamnimada ee horseedka ah ee ay ka waddo dhowr qaaradood.”
1999 - MSF oo Bilowdey Ololaha Helidda Daawooyinka Aasaasiga ah
Lyada oo malaayiin qof ay sanad kasta u dhimmanayaan cudurro faafa oo la daweyn karo, ayaa MSF ay bilowdey dadaal caalami ah oo ay xoogga ku saareyso in ay dawooyin helaan dadka saboolka ah dunida.
1999 - Dhibaatooyinka Kosovo
MSF oo ugu baaqdey in ciidamada Ruushku ay hubiyaan in ururrada bani’aadamnimadu ay gaaraan magaalada Grozny oo ayna cambaareysey duqeynta ay dadka rayidka ay cirka ka soo duqeynayaan Ciimada Cirka ee Ruushka
1999 - Dagaalkii Labaad ee Jejniya
2000 - Dagaalka Sokeeye ee Sierra Leone
MSF oo daweysey dhibbanayaasha dagaalka sokeeye ee dalkaa ka socdey.
2000 - Gargaar la Siiyey Magangelyo-doonka Yurub Jooga
MSF ayaa barnaamijkeeda ay ku gargaareyso magangelyo-doonka iyo muhaajiriinta aad waraaqaha sidan ku baahisey Beljim, Faransiiska, Talyaaniga iyo Spain.
2000 - Cudurka HIV/AIDS
MSF ayaa bilowdey in ay daawada antiretroviral siiso dadka la nool HIV/AIDS ee Thailand, waxaana ay sanadkii xigey ay mashaariic ka furtey Cambodia, Cameroon, Guatemala, Kenya, Malawi, iyo Koonfur Afrika, iyada oo aasaasiyan isticmaaleysey dawooyin antiretroviral oo nooca qiimaha jaban ee loo yaqaanno generic ah.
2001 - La-talinta Qulubka (trauma) ee Colombia, Sierra Leone, Sri Lanka, iyo meelo ka baxsan
MSF ayaa si kordheysa hawlaha caafimaadka dhimmirka ugu biirineysa waxqabadyada ay ka waddo dunida oo dhan.
2001 - Isbahaysigii uu Hoggaaminayey Mareykanka oo Weerarey Afqanistaan
Ka dib 11 Sebtembar, ayaa MSF ay muddo kooban waxa ay xubno badan oo shaqaalaheeda caalamiga ah ka mid ah ka daad gureysey dhulkii ay Dhaalibaan haysatey, iyada oo ku tiirsaneyd shaqaalaha Afqanistaaniyiinta ah in ay sii wadaan barnaamijyada caafimaadka intii ay socdeen wejiyadii hore ee dagaalka Mareykanku wadey. Haseyeeshee, markii la gaarey bishii Nofembar, ayaa shaqaalaha caalamiga ahi ay ku noqdeen dalka oo ay banraamijyadiina halkaa ka sii socdeen.
2002 - Macluushii ka dhacdey Angola
Markii uu burburey ciidankii falaagada ahaa ee UNITA oo uu joogsadey dagaalkii sokeeye ee 28ka sano socdey, ayaa MSF ay kumanaan carruur ah oo ay hayso nafaqo-xumo ba’an ku daweysey degaanno uusan gargaarka bani’aadamnimadu hore u gaari jirin. MSF ayaa ku dhalleeceysey Qaramada Midoobey in ay heshiis siyaasadeed oo ka dhaca Angoola dagaalka ka dib ay ka mudnaan siisey gargaarkii bani’aadamnimada ee sida weyn loogu baahnaa.
2002 - Weeraro Lagu Qaadey Shaqaalaha Gargaarka
ARjan Erkel oo ayaa lagu afduubey Jamhuuriyadda Ruushka ka tirsan ee Dagestan eek u taalla Waqooyiga Caucasus, waxaa uu ahaa dhibanihii ugu dambeeyey ee ay soo wajahdo halista soo wajahdey shaqaalaha gargaarka ee jooga degaannada ay iskahorimaadyadu ka jiraan dunida oo dhan. Waxaa ay qaadatey 20 bilood ka hor intii aan la sii deynin.
2002 - Cudurka Duumada (Malaariyada) oo Malaayiin ku Disha Afrika
Iyada oo cudurka duumadu ee ka jira dalal dhowr ah ay ka muuqato in uu si kordheysa ugu adkeysanayo dawooyinka caanka ah ee lagula dagaallamo sida chloroquine, ayaa MSF ay badisey isticmaalka ay isticmaasho dawooyinka iskujira ee ay salka u tahay artemisinin waxaana ay xoogga saareysaa in ay baahsan loo helo daawooyinkaas.
2003 - Mareykanka ayaa Weerarey Ciraaq
MSF ayaa sii joogtey Baqdaad intii uu socdey weerarkii koowaad, iyada oo taageero siineysey cusbitaallada iyo xarumaha caafrimaadka ee ku yaalla magaalooyin gaar ah. Goor dambe, ayaa MSF ay ku dhalleeceysey dowladda mareykanka in ay hay’aado gargaar oo gaar ah u magacowdey dadaalkeeda dagaalka iyo sidoo kale in ay ka soo bixi weydey mas’uuliyaddii saarneyd maaddaama ay tahay dowladdii dalka haysatey, sida uu ku waajibinayo sharciga bani’aadamnimada ee caalamig ah, taas oo ah in gargaar caafimaad oo ku filan dadka rayidka ah.
2003 - Dagaal Culus oo Ka Dhacay Caasimadda Laybeeriya
Intii uu socdey dagaal xooggan ciidamada dowladda iyo falaagada ku dhex marey Monrovia, ayaa MSF ay gargaartey kumanaan dad barokacay ah waxaana ay cusbitaal ku-meel-gaar ah oo xaaladaha degdegga ah loogu talogaley ka sameysey halkii ay deganneyd MSF.
2003 - Rayidka oo ku Silcaya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo
MSF ayaa weli wadda hawsha oo sii ballaarineysa barnaamijyada caafimaad oo kala duwan oo loogu talogaley si ay daryeel caafimaad oo degdeg ah ay ku siineyso dadka dhexda u galey iskahorimaadka ay ku dhinteen malaayiin qof oo weli ah oo dhab ahaantii ah mid aan u muuqan dadka dibadda ka jooga.
2003 - Dadaalka Dawooyinka Cudurrada La Dayacay oo la Abuurey
MSF waa mid ka mid ah wadahawlgalayaasha aasaas urur aan faa’iido-doon ahayn oo cusub oo u go’ay in uu dawooyin u sameeyo cudurrada la dayacey sida Chagas, kala azar, iyo sleeping sickness (cudurka hurdo-soojeed), iyo in uu kula loolamo faa’iido doonka ah dhinaca cilmi-baraista iyo kobcinta dawooyinka
2004 - Xaaladihii Degdegga Ahaa ee Daarfuur, Suudaan
MSF ayaa barnaamijyo nafaqeyn, barnaamijyo biyo iyo fayadhowr, xarumo caafimaad, iyo ololayaal tallaal ka bilowdey galbeedka Suudaan iyo dalka Jaad, halkaas oo kumanaan qof ay ka soo qaxeen rabshad lala beegsadey daraaddeed, arrintaas oo 2005tii iyo 2006dii u xuub-siibatey mid ka mid ah waxqabadyada degdegga ah ee taariikhda MSF soo mara.
2004 - Shan ka mid ah Shaqaalaha Gargaarka ee MSF oo lagu Diley Afqanistaan
Fasil Ahmad, Besmillah, Hélène de Bier, Pim Kwint, iyo Egil Tynaes ka dib markii ay gargaar bixinayaan muddo 20 sano ah.
2004 - MSF ayaa ka baxdey Ciraaq
Iyada oo ay kordhayeen weeraradii lagu hayey shaqaalaha gargaarka bani’aadamnimada, ayaa MSF ay go’aansatey in heerka halista ay ku jireen shaqaalaheedu ay ahayd mid aan la aqbali karin waxaana ay qaadaneysaa go’aan ay qaadashadiisu adag tahay oo ahaa in ay xirto barnaamijyadeedii caafimaadka.
2004 - Bad-gariirkii Tsunami ayaa ku dhuftey Koonfurta Aasiya
MSF ayaa $ 133 milyan oo dollar ka heshey dadweynaha waxaana ay dadka weydiisatey in ay joojiyaan deeqaha ay u bixinayaan wax ka qabashada dhibaatooyinka, iyada oo heshey lacag ka badan intii ay ugu baahneyd barnaamijyadeeda caafimaad ee ay gobolka ka fulineysey. MSF waxa ay sidoo kale deeq-bixiyeyaasha weydiisatey in deeqahooda “ka qaadaan shuruudda la socota” si loogu adeegsan karo xaalado kale oo degdeg ah oo jira; badi waa ay oggolaadeen.
2005 - Dhibaatooyinka Nafaqo ee Nayjar
Iyada oo lacag ka soo qaadatey maaliyaddii la heley ka dib markii uu dhacay bad-gariirkii tsunami ee shuruudda laga qaadey, ayaa MSF wax ka qabaneysaa dhibaatooyin nafaqo-xumo oo oo la iska indhatirey oo la dayacay oo ka jirey dalka Nayjar, iyada oo 63,000 oo carruur ay ahayso nafaqo-xumo aad u ba’an ku daweysey qaab bukaan-socod ah iyada oo adeegsaneysa nooc cusub oo cunto u diyaarsan in la cuno ah, waxaana ay ahayd markii ugu horreysey ee daaweynta noocan ahi ay u adeegsato si ballaaran. MSF ayaa markii dambe wax ka beddeshey habraacyadeeda ay ku daaweyneyso nafaqo-xumada si ay ugu darto habkaan casriga ah.
2005 - Dadka Rayidka Ah ee Caasimadda Haiti oo Hub ka dul dhacayo
MSF ayaa qalliin, daryeelka caafimaadka aasaasiga ah iyo kan dhimmirka siineysa dadka dhexda u galey rabshadda ka jirta magaalada Port-au-Prince, iyada oo daaweysey kumanaan qof oo qaba dhaawacyo loogu geystey xabado, baangado, iyo middiyo, waxaana ay ugu baaqdey dhammaan kooxaha hubeysan in ay ixtiraamaan bedqabka dadka rayidka ah.
2005 - Dhul-gariir aad u weyn oo Ku Dhuftey Koonfur-galbeed Aasiya
MSF ayaa ka shaqeyneysey xarumo caafimaad oo wareega si ay u gaarto dadka ku xayirmey tuulooyinka fogfog waxaana dhistey teendhooyin la buugin karo oo lagu fuliyo qalliinada si ay u daweyso kumanaan dad ah oo ku dhaawacmey dhul-gariirki weynaa ee ka dhacay gobolka Kashmiir ee ka tirsan dalalka Pakistan iyo Hindiya.
2006 - Daryeel Qalliin oo la Siiyey Dhibanayaasha Dagaalka ee Ciraaq
Iyada oo si ammaan ah ugu shaqeyn weysey Ciraaq, ayaa MSF waxa ay barnaamij qalliin oo dib loogu soo dhisayo xubnaha dhaawacu burburiyey ka sameysey magaalada Cammaan ee dalka Jordan si ay u daweyso bukaannada dhaawacyada aadka u ba’an ay ka soo gaareen dagaalka kuwaas oo ay soo gudbiyaan shaqaalaha caafimaadka ee ay wadashaqeynta leeyihiin ee ku sugan Ciraaq
2006 - Daacuun aad u Ba’an oo ka Dillaacay Angola
MSF ayaa daweysey 26,000 waxaana ay dirty in ka badan 400 ton oo sahay wax looga qabanayo daacuunka ka bilowdey caasimaddey oo kuna faafey markii ugu horreysey in ka badan nus qarni.
2006 - Sri Lanka oo Dib ugu noqotey Dagaal
Iyada oo tobanaan kun oo qof ay ka baxsanayaan dagaal ka soo cusboonaadey waqooyiga dalka, ayaa MSF ay barnaamijyo qalliin dib uga furtey waqooyiga iyo bartamaha Sri Lanka ka dib markii caqabado badan oo is dabajoog ah ay kala kulantey maamulka halkaa ka jira.
2007 - Daaweyn Cusub oo loo heley Duumada (Malaariyada)
Dadaalka Daawooyinka Cudurrada la Dayacay iyo sharikada dawooyinka ee sanofi-aventis ayaa bilaabey soo saaridda ASAQ, oo ah kiniini aan qaali ahayn oo isticmaalkiisuna fudud yahay. ASAQ lama xiran, taasna waxa ay oggolaaneysaa in sharikadaha kale ay qiime jaban ku soo saaraan.
2007 - Sharikadaha Sameeya Dawooyinka oo Isku dayey in ay Hor-istaagaan Helitaanka Dawooyinka Aasaasiga ah
MSF oo sameysey olole ka dhan ah Novartis oo dood ka keentey sharciga patent-iga (badeecad xirashada) ee dalka Hindiya si ay u ilaaliso in qiime jaban lagu soo saaro dawooyinka generic-ga ah. MSF waxa ay Hindiya ka soo iibsataa 80 boqolkiiba daawada antiretroviral ee ay ugu baahan tahay 100,000 ee bukaan eek u kal a baahsan dunid aoo dhan. Bishii Agoosto, ayaa maxkamadaha Hindiya ay ka xukumeen Novartis.
2008 - Dagaallo Halakeeyey Soomaaliya
Boqolaal kun oo rayid ah ayaa ka qaxay caasimadda, Muqdisho, iyada oo dagaalkii ugu xumaa muddo 15 sano ah uu ka dhacay magaalada o dhan. Iyada oo ay jirto nabadgelyo-xumo aad u weyn, ayaa MSF waxa ay barnaamij qalliin ka furtey Muqdisho, waxaana ay mashruuc cusub ka aasaasey meel waxyar ka baxsan caasimadda si gargaar ay u siiso qaar ka mid ah kumaanka qof ee ka soo barokacay rabshadda, waxaana ay barnaamijyo caafimaad ka waddaa dalka intiisa kale.
2008 - Ololaha Helitaanka Dawooyinka Aasaasiga ah oo Wax Ka Qabanaya Nafaqo-xumada
Guusha laga gaarey in cuntada u diyaarsan in la cuno lagu daweeyo nafaqo-xumada ba’an iyo tan dhexdhexaadka ah ee carruurta, ayaa MSF waxa ay u ololeyneysaa in hay’adaha kale ee hawshaas oo kale qabto in ay kor u qaadaan barnaamijyadooda ayna adeegsadaan daaweyn taas la mid ah. MSF waxa ay ku dadaaleysaa in ay hay’adaha ka dhaadhiciso in barnaamijyada gargaarka iyo nafaqada lagu daro waxyaabo u habboon carruurta aadka u nugul – oo ah kuwa ay da’doodu u dhaxayso li bilood ilaa laba sano jir.
2008 - MSF oo Ku Soo Noqotey Ciraaq
MSF ayaa sbarnaamijyo qalliin ka yagleeshey gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq si ay ugu daweyso dadka rayidka ah ee dhaawacyada qaba si ay daryeel ku filan ku heli waayey cusbitaallada dhaawacu ka tan badiyey, ay shaqaaluhu ku yar yihiin, oo uu qalabka caafimaadkuna ku yar yahay ee ku yaalla degaannada kale ee dalka Ciraaq waxaana ay sii waddaa in cusibtaallada ay siiso sahay dawooyin iyo qalab caafimaad.
2008 - Dhibaatooyin Ka dhacay Dalka Jaad
In ka badan 150,000 barokacayaal ah ayaa isku dayey in ay ku noolaadaan xerooyin ku-meel-gaar ah oo ku yaalla bariga Jaad iyada oo uu ka sii darayo dagaalka u dhexeeya dowladda iyo kooxaha falaagada ah. MSF ayaa kor u qaaddey barnaamijyadeeda caafimaadka waxaana ay ku baaqdey in la bixiyo gargaar bani’aadamnimo oo ballaaran oo caalami ah..
2008 - Deganaansho La’aan Siyaasadeed oo ka dhacdey Kenya oo ay ku Barokaceen Kumanaan
MSF waxa ay kumanaan rayid ah ku dawysey xaafadaha iskurararta ah ee Nayroobi, waxaana ay gargaartey barkacayaasha reer Kenay eek u jira xerooyinka dadka gudaha ku barokacay kuwaas oo ka soo cararey guryahooda ka dib markii doorashooyinkii madaxweynenimo ee lagu doodey ay dhaliyeen rabshado baahsan.
2008 - Shaqaale Gargaar oo MSF u shaqeynayey oo lagu diley Soomaaliya
Maxamed Cabdi Cali (Bidhaan), Damian Lehalle, iyo Victor Okumu ayaa la diley markii bamboo waddada dhinaceeda la dhigey oo iyaga lala beegsaneyey uu ku qarxay gaarigii MSF ee ay la socdeen. MSF ayaa dhammaan shaqaalaheedii caalami ahaa ka soo saartey dalka waxaana y sii waddaa in ay barnaamijyo la soo koobey oo ay wadaan shaqaale Soomaali ah ay ka fuliso dalkas.
2008 - Rabshadda ka dhanka ah Dadka Rayidka ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo oo kor u kacdey
MSF waxa ay hawlahooda waddaa xarumo caafimaad oo warwareega, barnaamiyo qalliin, barnaamijyo nafaqeyn, waxaana y daaweyn iyo la-talin siisaa dhibbanayaasha la kufsadey iyada oo kumanaan reer Kongo ah oo ku nool Waqooyiga Kivu ay ka qaxayaan weerarada badatey ee soo noqnoqonaya ee kooxaha hubeysani ay ku soo qaadayaan tuulooyinkooda.
2008 - Duufaan Ku Dhufatey Myanmar
Shaqaalaha MSF ayaa horeba uga shaqeynaya dalka iyaga oo gargaar siinaya kumanaan qof oo ku barokacay duufaanta iyada oo dowladduna ay hortaagan tahay in ay u shaqaale kale oo dheeri ay u oggollaato in ay dalka soo galaan.
2008 - Rabshado Ajnebi Nacayb ah oo Tobanaan Kun ku Barokiciyey Koonfur Afrika
MSF ayaa gargaar caafimaad siisey kumaan qof oo u dhashey dalka Zimbabwe iyo dad kale oo ajnebi ah oo u dhashey dalal kale oo afrikaan ah ka dib markii kooxo gaangistarro ah oo careysan ay soo weerareen, iyaga oo diley 62 qof oo 100,000 iyo ka badanna ku khasbey in ay nafahooda la baxsadaan. MSF ayaa dhalleeceysey waxqabadka aan dad ku filleyn ee ay bixinayaan dowladda Koonfur AFrika iyo Hay’adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobey.
2008 - Dhibaatooyin Nafaqo oo ka dhacay Itoobiya
MSF ayaa daweysey in ka badan 72,000 oo carruur ah iyada oo dhibaatooyin nafaqo oo waaweyn ay ka dhacayeen koonfurta dalka taasna ay keentey abaar, dalagga soo go’ay oo yar, iyo qiimaha cuntada ee kor u kacay|.
2008 - La-dagaalanka Daacuunka ee Zimbabwe
Ka dib markii uu dillaacay daacuun bishii Agoosto, ayaa MSF waxa ay qokii bilood ee xigey ay daweysey in ka badan 65,000 qof oo qabey cudurka iyada oo sidoo kale tas-hiilaadka dowladda ku taageereysay sahay, lacag dhiiriglein ah oo la siiyo, iyo barnamaijyada daaweynta.
2009 - Iskahorimaadka Qaza
MSF ayaa taageereysa cusbitaallada Qaza ka dib markii ay Israa’iil ku soo qaaddey weerar iyada oo k ajawaabeysa gantaallo gudaha lagu sameeyey oo ay Israa’iil ku soo ridayeen dad xag jir ah. Ka dib markii xabbad-joojin lagu dhaaqey, ayaa MSF waxa ay furtey cusbitaal qalliin waxaana ay sidoo kale ay bixisey daryeelka ka dambeeya qalliinka iyo iyo mid nafsaani ah.
2009 - Fowdo iyo jahawareer ka dhacay Gobollada Qabaa’ilka ee Pakistan
Iyaa oo ay ka sii darayaan rabshadda iyo barokaca baahsan ee gobollada waqooyi ee Pakistaan, ayaa MSF waxa ay daryeel degdeg ah ku bixineysaa 12 goobood. Hasyeeshee, ammaanka ayaa ah mid si joogto ah looga welwelo, waxaana la laaley hawlaha qaar ka dib markii laba shaqaalaha ka mid ah lagu diley Degmada Swat.
2009 - MSF oo Dib-u-furtey Barnaamijyadeedii Afqanistaan
Ka dib markii ay ka maqneyd shan sano (eeg 2004), ayaa ururku uu ku soo noqdey dalka isaga oo bilaabey in uu taageero cusibtaallada Kabul iyo Lashkargah, oo ah caasimadda Gobolka Hlemand.
2009 - Sanad Adag oo Soo Marey Suudaan
MSF ayaa waxqabadyo degdeg ah ka bilowdey koonfurta si ay wax uga qabato rabshadda iyo cudurrada dillaaca oo sii badanaya, halka, Waqooyiga Suudaan ay dowladdu soo ceyrsiey laba qaybood oo ururka ka mid ah oo afar xubnood oo shaqaalah aka mid ahna lagu afduubey Daarfuur. Waxaa sidaa daraaddeed la xirey qaar ka mid ah barnaamijyada, laakiin haddana waxa ay MSF bixisaa ku dhowaad 129,000 oo la talin waxaana ay taageertaa xarumo caafimaad oo tiro badan sanadka oo dhan.
2010 - Dhul-gariirka Haiti
Ka dib markii dhul-gariir aad u weyn uu ku dhuftey Haiti bishii Jannaayo 12keedii, ayaa MSF waxa ay bilowdey mid ka mid ah waxqabadyadeedii ugu weynaa taariikhdeeda, iyada oo barnaamijyadeed ku ballaarisey dalka kuwaas oo ahaa 3 ayna ka dhigtey 26 barnaamij, iyada oo daweysey bukaanno ka badan 170,000, oo fulisey in ka badan 11,000 oo qalliin muddadii shanta bilood ahayd ee ka dambeysey.